Muslimiinta oo maanta bilaabay acmaasha xajka – Madal Furan
Hoy > Warka > Muslimiinta oo maanta bilaabay acmaasha xajka
Muslimiinta oo maanta bilaabay acmaasha xajka
Editor August 19, 2018 Warka 0
Madal Furan – Tirada muslimiinta caalamka ka timid ee ku sugan magaalada barakaysan ee Maka ayaa lagu qiyaasay 2 milyan oo qof si ay u gutaan waajibaadka xajka, waxaana maanta bilaabmay howsha gudashada acmaasha xajka.
Xajka sannadkan ayaa imaanaya xilli dowladda Sucuudiga ay isku dayayso inay dhaqan geliso qorshahaha isbaddalada ah ee dalkaasi laga hergelinaya oo ay kamid tahay in haweenka loo ogolaado inay baabuurta kaxeeyaan.
Dowladda sucuudiga ayaa sidoo kale sheegtay inay waxkaqabanayso adeegyada loo fulinaya xujayda.
Soomaali badan ayaa kamid ah muslimiinta sannadkan xajinayso, Xaaji Fu’aad Axmed Warsame oo kamid ah xujayda ayaa BBC-da u sheegay in shirkado badan sannadka ay xujayda kasoo qaadeen dalka Soomaaliya islamarkaasna ay u fududaysay inay la dejiyo meel u dhaw xaramka.
Fu’aad warsame wuxuu yiri “Xujayda ka timid Soomaaliya ayaa uga dhaw xaramka dadka kale ee kasoo xajiyay dowladaha deriska marka la yiraahdo deegaan ahaan, awal way ka fogaan jireen, xujayda qaarkood toos ayaa Madiina looga dejiyay, qaarna kalena waxay kasoo degeen Jidda basas ayaa lagu geeyay magaalada Madina”
Xaajii Fu’aad warsame ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Sucuudiga ay xujayda ay u diyaarisay adeegyada laga maarmaanka ah oo ay kamid tahay biyaha, caafimaadka iyo gaadidka.
Ammaanka xajka ayaa sii wayn loo adkeeyay iyadoona boolis badan lasoo dhoobay waddooyinka magaalada Maka si ay ammaanka u sugaan.
Sida uu sheegaya Fu’aad, xajkan wuxuu xajkii hore kaga duwan yahay in ammaanka si wayn loo xoojiyay iyo adeegyada loo fidinaya xujayda oo sare loo qaaday.
Sawiro:- Magaaladda Muqdisho oo laga bilaabay diiwaangelinta Ciidamaa Booliska.
Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed oo liiska ka saaray musharax Roobow
Fadeexad ka dhalatay wasiirrada Falastiiniyiinta oo qarsoodi mushaharka ku korodhsaday